Duuliye Sare Asli Xasan-Nuur Cabaade iyo Jaaliyada DDSI Texas oo Soo Dhaweeyey Booqashada Madaxwaynaha iyo Waftigiisa Cambaareeyayna Ginbot Sabat - Cakaara News
Duuliye Sare Asli Xasan-Nuur Cabaade iyo Jaaliyada DDSI Texas oo Soo Dhaweeyey Booqashada Madaxwaynaha iyo Waftigiisa Cambaareeyayna Ginbot Sabat
Dallas TX(CN) Talaado March.17.2015.Duuliye sare Asli xasan nuur cabaade ayaa email noogu soo dirtay taageerada ay lagarab taagan tahay Madaxwayne Mudane CMC,Xukuumada iyo Xisbiga talada deegaanka haya(XDSHSI) isbedelada xawliga ah ee ay sanooyinkii ugu danbeeyay ka taabo galiyeen si siman guud ahaan 9ka Gobol,68da Degmo iyo 4ta maamul magaalo.
Dhanka kale Duuliye sare Asli xasan nuu cabaade(Calan Saxa) ayaa cambaaraysay qorshihii fashilmay ee ay u soo maleegeen Ginbot sabat iyo shyacbiya madaxwaynaha DDSI xili uu ku sugnaa Washington DC iyadoona hadalkeeda ku bilawday sidatan.
Anigoo ku hadlaya magacayga Duuliye Sare Asli Xasan Cabaade iyo kan Jaaliyadda (DDSI) ee magaalada (Dallas) ee gobolka (Texas), ayaa waxaannu aad iyo aad u taageersannahay Madaxwaynahayaga (DDSI) Mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hadda ku sugan waddanka Mareykanka ee aannu ku noolnahay.
Waxaa kaloon si kulul u cambaareyneynaa ninkii foosha xumaa ee la soo adeegsaday, kana soo jeeday Dergigii waa hore gabbalkoodu dhacay, wixiisuna ahaayeen wax iskuma fale oo aan waxba tari kareyn, kana xun waxqabadka wayn ee uu qabtay Madaxwaynahayaga iyo horumarinta nabadgelyada leh uu gaadhsiiyay (DDSI).
Markastana waannu taageersannahay Madaxwaynahayaga Mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo XDSHSI, waayo way caddahay shantii sanee u dambeysay inuu (DDSI) uu sugay nabadgelyadooda, gaadhsiiyayna horumar buuxda oo dhankastaba leh taasoo lagu helay maamul suuban oo ay qurbajoogtu ku hirato kuwaasoo maalgashi balaadhan deegaanka ka samaystay.
Kannaxoo nafta waa ruuxaan dooneyn horumarkayaga.
Dergigan majnuunka ahee, maskaxdu doorsoontay.
Dergigan musiibada ahee, micidu dheeraatay.
Dergigan lafaha mudhuxsadee, muruqna reebeyn.
Dergigan madhuushiisu yahay, mooye qaab daran.
Dergigan mijintiisu tahay, miiqaan taag daran Waa in mareeg lagu dabraa, sida maliid Awre.